5 Innovative Ecommerce Zvikumbiro Unofanira Kuedza | ECommerce nhau
Encarni Arcoya | | eCommerce, ECommerce kudzidziswa, Zvekutengeserana zvemagariro
Tevere tinoda kugovana newe runyorwa rwe 5 yekuvandudza ecommerce kunyorera iyo yavanogona kushandisa kutenga zvigadzirwa kana contract services. Dzakati wandei dzekushandisa idzi dzinoshanda semisika kana kubatsira vashandisi kuwana zvigadzirwa zvitsva
Iwe unogona zvakare kuwana zvimwe Inovandudza e-commerce e-commerce kunyorera izvo zvinotsanangudza zvakare nzira iyo zvinhu nemasevhisi zvinotengwa.
1 1. Chitubu
2 2. Chigadzirwa Hunt
3 3. Wanero
4 4. Simudza
5 5. Hunt
Icho chishandiso chinokupa iwe kupinda kune instagram foto yekudya yezvose zvigadzirwa zvaunogona kutenga. Inosanganisira yepamusoro dhizaini uye zvigadzirwa zvepamusoro, uyezve zvinokutendera kuti utarise kuunganidzwa kubva kune vane simba vaparidzi.
Tichifunga nezve Instagram ndiyo social network inoshandiswa nevanhu vazhinji, uye kuti iri kudzinga vamwe, zvakajairika kuti isu tinofunga nezvayo kuti tisimudzire pamberi peCommerce. Ehezve, haazi ese madingindira anobudirira online, saka unofanirwa kuona kuti ndechipi chakanyanya kunaka.
2. Chigadzirwa Hunt
Ndicho Ecommerce kunyorera iyo inobvumidza kutsvaga nekugovana zvigadzirwa zvinoenderana, kunyanya izvo zviri muchikamu chehunyanzvi Vashandisi vanogona kunyange kuvhotera zvigadzirwa zvemhando, kutsvagisa, uye kunyangwe kutevera hurukuro nevateveri vechigadzirwa.
Kunyangwe zviri pamusoro, iwe unofanirwa kuziva kuti chishandiso ichi chinotarisa zvakanyanya pahunyanzvi. Ndokunge, izvo iwe zvaunowana pano zvigadzirwa zvine chekuita nema geeks, gadget, uye nevamwe, asi kwete nechero mhando yezvigadzirwa. Nekudaro, iwe urikuenda kunotsvaga mitambo, mabhuku, maapplication, podcast, nezvimwe. izvo zvakafanana nemusoro wenyaya iwoyo.
Inoshanda chaizvo kubvira, kana ukangoiisa, iwe uchafanirwa chete kutarisa zvigadzirwa zvaunoda, pamwe nekwaniso yekuvabata kana kuigovana nedzimwe shamwari. Uye zvakare, iwe unogona kuseta rondedzero yeshamwari uye, navo, kukwanisa kuona zvavanoita, zvigadzirwa zvavanochengetedza kana kufarira, nezvimwe. Neiyi nzira, kana iwe uchida kuvapa chipo, iwe uchagara uchikwanisa kuzviita nekuti iwe unozogona kuona izvo zvavanofarira kuti vasazokundikana chero nguva.
Hazvizivikanwe, asi chokwadi ndechekuti, kana eCommerce yako iine hukama netekinoroji, inogona kunge iri nzvimbo yakanaka yekudyara nekuti uri kuzowana vateereri vanonyatsoifarira, saka kana iwe ukapa zvigadzirwa zvako iwe inogona kuwedzera mukana wekutengesa kunoitika. Ehe, iwe unofanirwa kutarisira zvese zviri zviviri tsananguro yezvigadzirwa nemifananidzo. Kunyanya iyo yekupedzisira sezvo vari ivo vanozove nekuonekwa kwakanyanya (chero bedzi vasingabatise pamufananidzo ivo havazokwanise kuverenga iwo mavara iwe aunoisa pane yega kuti aite kuti vaende kunotenga).
Uyu Ecommerce kunyorera inotsanangurwa se "A Shopping mall pafoni", nekudaro ichipa mushandisi chikafu chekubatanidza zvigadzirwa, zvese izvo zvinotumirwa nevashandisi. Iwe unogona kutevera zvitoro uye vanhu vevanofarira munzvimbo imwechete, pamwe nekuwana ruzivo nezve zvigadzirwa zvakagadzirirwa mushandisi.
Chaizvoizvo, Wanelo yakavakirwa pane chishandiso chekuchengetedza izvo zvingave zvinoda mumwe munhu, nenzira yekuti, kana iwe uchida kuvapa chipo, iwe unongoda chete kuona zvavakafarira kuti uwane pfungwa yezvavanoda. Mune mamwe mazwi, inzira yekutaurirana nevanhu nekuvapa mienzaniso yezvigadzirwa zvine chekuita nezvavari kutsvaga.
Uye zvakare, hazvidi kuti vasiye application kuti vakwanise kutenga, vanogona kuzviita mairi kuburikidza nekadhi rechikwereti.
Aesthetically, Wanelo achakuyeuchidza zvakawanda zvePinterest, sezvo kukwezva kukuru kweapp iri mifananidzo, asi kugona kutenga usina kusiya kunobatsira kuti kutenga kwacho kuitike. Naizvozvo, kune eCommerce, kuvapo kunogona kuvhura imwe nzira yekuwana mari nechitoro chepamhepo, kunyanya nekuti kana ukatengesa zvakanaka, vangangotsvaga kudzokorora chiitiko ichocho gare gare.
Ehezve, iwe unofanirwa kuyeuka kuti vateereri vekushandisa ndeye vechidiki, kunyanya vakadzi, vari pakati pemakore gumi nemashanu kusvika makumi matatu ekuberekwa. Izvi hazvireve kuti hakuna akura, asi pachave nezvakaderera zvemukati uye nemusika wakaganhurirwa uyo vanhu ivavo vangangonzwa vasina kuzivikanwa nawo.
Iwe zvakare une zvakashata, uye izvo ndezvekuti ine zvinopfuura hafu yemiriyoni zvitoro zvinopa zvigadzirwa zvavo. Izvi zvinoreva kuti makwikwi acho akaomarara, kunyanya kana uchikwikwidza nezvitoro kutenderera pasirese. Naizvozvo, heino yepamusoro mhando mifananidzo inosangana nevanhu ndiyo yako yakanaka bhizinesi kadhi.
Ndicho Ecommerce app yekutenga nekutengesa makadhi echipoNaizvozvo, vashandisi vanoiisa pafoni yavo vanogona kuwana kuwana makadhi echipo akaderedzwa kubva kumabhureki akadai seTarget, Home Depot, uye Macy.
Inoshanda zvirinyore sezvo uchigona kubatana nemhando dzinopfuura chiuru dzakasiyana, mamwe acho achinyatso kuzivikanwa. Uye chii chaunofanira kuita? Zvakanaka, chinhu chekutanga ndechekutsvaga sarudzo hombe yezvidimbu zvakanyorwa mukushandisa. Izvi zvinoderedzwa zvinopihwa kuburikidza nemakadhi echipo kune chero munhu kuti ashandise.
Uye zvakare, iwe haungogone chete kuwana makadhi ekupfeka, kunewo zvitoro, maresitorendi, runako salons, cosmetic brand uye zvimwe zvakawanda. Kana ukangovabata, unogona kuzvishandisa zviri nyore muzvitoro, uye uchave newakawanda sezvaunoda.
Zvakanakisa pane zvese izvozvo zvinoshanda munzvimbo zhinji, izvo zvinokutendera kuti ushandise zvakanyanya kune izvi (uye neizvozvo unosvika kune vamwe vashandisi).
Ehezve, izvi padanho rekushandisa. Asi kana iwe uchida kuti vaise eCommerce yako, iwe unofanirwa kungoonana navo kuti uone kuti ndeapi mamiriro ezvinhu aunofanirwa kusangana kuitira kuti chitoro chako chepamhepo chikwanisewo kubatsirwa.
Iwe unofanirwa kuyeuka kuti iko kushanda kwepasirese, izvo zvinoreva kuti, kana iwe uine rombo rakaringana kuti ubvumirwe, iwe uchaenda kunze kwenyika dzese uye vazhinji vangangoda kutenga kubva kwauri. Sei tichikuudza izvi? Zvakanaka, nekuti zvingave zviri nyore kuti chitoro chako chepamhepo chionekwe mune mimwe mitauro, kuwedzera kuSpanish, senge chiRungu, uye kuti iwe unovandudza mari yekutumira kunze kweSpain (kana iwe usina) kuti ujekese zvese izvi usati wapedzisira wave nemafungiro akaipa.
Ndicho e-commerce kunyorera iyo mune ino kesi inobvumira vashandisi kuisa pikicha yechigadzirwa chavari kutsvaga. Nharaunda yemutengi inozokubatsira iwe kuti utenge uye utenge icho chigadzirwa nemutengo unodhura. Vashandisi vanogona ipapo kuona maitiro echigadzirwa kana kushandisa hunyanzvi hwavo kukurudzira zvigadzirwa kune vamwe vanhu.
Kana tisati tataura nezvekushandisa kwakanangana nehunyanzvi hwehunyanzvi, panguva ino ticha kukuudza nezve HUNT, chishandiso chakanangana nenyika yefashoni.
Uye, sezvatakakuudza kare, zvinoenderana ne "kutsvaga nekubata" kwezvinhu zvemafashoni, zvingave zvipfeko kana zvishongedzo. Kuti uite izvi, zvazvinoita kuve nerunyorwa rukuru rwezvigadzirwa uye nzvimbo dzeInternet dzinoonekwa senge huru mareferensi ekugona kunyora zvigadzirwa zvakafanana kana zvakafanana neizvo zvauri kutsvaga.
Iri svondo inowanikwa kune vese Android uye iOS Uye zvinoenderana nenharaunda nenzira yekuti kana iwe ukaisa pikicha nekuti wakaifarira, nharaunda yese inokubatsira iwe kuwana icho chinyorwa chekupfeka kana icho chinowanikwa. Uye zvakare, hukama hunogadziriswazve maererano nemibvunzo nemhinduro nezve fashoni, zvipfeko, zvipfeko, rubatsiro,
Izvi zvakabvumira kuti ikure zvakanyanya nekuti inobatsira vanhu vane zvakafanana hobby zvakafanana kuti vataure uye kuti vawane masevhisi ekubvunzana nemifananidzo, kubvunza nezvekupfeka, kushamba wega, nezvimwe. nyore.
Kana iri dhizaini yaro, yakavakirwa, semamwe mashandisirwo, muchitaira chakafanana nePinterest, uko kwavanokuratidza mifananidzo yakawanda ine mukana wekutombozvitenga.
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » eCommerce » ECommerce kudzidziswa » 5 Innovative Ecommerce Mapurogiramu Iwe Unofanira Kuedza